Nhoroondo yeKambani - Guangdong Yuanfang Technology
Makore makumi maviri nemana ekuberekwa
Kunze uko apo makambani mazhinji ari mubishi kufukidza maindasitiri mazhinji nekukurumidza sezvavanogona, muridzi wedu, zvakare mainjiniya VaHenry Liao, kune rimwe divi anga achiisa hunyanzvi hwake makore makumi maviri ekuvandudza nekusimudzira kuzadzisa vatengi vazhinji chikonzero chekutsvaga tsika, kunyatsoita uye shoma anoumba.
Umbwa muna 1996 unonzi Hanking Mould akatanga chakuvhuvhu kugadzira uye jekiseni Kuumbwa bhizimisi muShenzhen.
Muna 2017, kuti zvinobudirira kupindura kukura kudiwa kumhiri kwemakungwa musika, HanKing Mould akagadza munhu nyanzvi nemazvo muforoma fekitori yekugadzira yakanyoreswa se Guangdong Yuanfang nemazvo Technology Co., Ltd. kushandira vatengi vedu pasirese.
KuYuanfang Technology, tinozvipatsanura kubva pamakwikwi edu zvichibva pane yedu yakakura ruzivo mune yedu dhizaini dhizaini nekugadzira maturusi. Yedu ruzivo dhizaini uye timu yeinjiniya inogona kugadzirisa mamwe akaomesesa uye akaoma kuumbwa ayo mazhinji emakwikwi edu asingakwanise kubata nawo.
Yakakura Hunyanzvi mune ese Elements ejekiseni Mould.
Yekutanga fekitori yakatarwa mutengo
Dzoka shure-uye-mberi nevatengesi vako. Wedzera Yuanfang semutengesi webasa rekupedzisira-kumagumo.
Yuanfang inowedzera yemhando yekufambisa
Yedu Project Management Hofisi inoongorora chiyero cheiyo tooling chirongwa, kuendesa uye mutengo. Iyo manejimendi manejimendi timu inochengetedza kutaurirana kweiyo projekiti chinzvimbo zvese mukati uye kumutengi.
Akavimbika uye ane ruzivo mumusika wekumadokero
Yuanfang ruzivo epurasitiki jekiseni anoumba uye kugadzirwa kumhiri kwemakungwa pamusika anopfuura makore gumi; isu takaisa Mushure mekutengesa -sevhisi nzvimbo muEurope neNorth America uye tichave nekuwedzera nekupa chakuvhe chekuchengetedza uye rutsigiro rwehunyanzvi.
Prototype Mould Vagadziri, Mould Vagadziri, Mould Factory, Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Tsika Mould, Plastic Kuisa richigadzirisa,